Mibro Lite, nyocha, ọnụahịa na nkọwapụta | Androidsis
Anyị na -eji Android nyocha nke smartwatch nke mbinye aka nke maara nke ọma anyị. Onye ọhụrụ sitere na ezinụlọ Mibro. Anyị enweela ike ịnwale ụbọchị ole na ole Mibro Lite, na nyocha a anyị na -agwa gị ihe niile banyere elekere ruru eru nke na-enye ọtụtụ ihe maka obere ntakịrị.
Oge a anyị nwere smartwatch nwere a okirikiri udi okirikiri, yiri n'echiche a ka Mibro Ikuku na anyị nwere ike nyochaa ọnwa ole na ole gara aga, ma na ọdịiche dị ịrịba ama na ọdịdị onwe ya na n'ime uru nke ọhụrụ nlereanya a na-enye anyị.
1 Mibro Lite, otu ihe atụ maka ezinụlọ
3 Mibro Lite imewe
3.1 Otu bọtịnụ akụkụ
4 Kedu atụmatụ Mibro Lite na-enye?
5 Mibro Lite akụkọ ihe mere eme
Mibro Lite, otu ihe atụ maka ezinụlọ
Dị ka anyị na-eme na ụdị ndị gara aga, atụnyere onye otu ọhụrụ a na ndị bu ya ụzọ anyị na -ahụ ọtụtụ ọdịiche. Banyere ọdịdị elekere n'onwe ya, anyị na-ahụ ka Mibro Lite si alaghachi nzọ nzọ na-akpụzi oval dị ka m mere na Mibro Air wee pụọ n'ụdị square nke agba Mibro. Ọ bụ ezie na ihuenyo gburugburu na-emeri na nha na ịdị mma.
Ihe a na -ahụ anya na ụdị ọhụụ ọ bụla bụ a Ozizi evolushọn pụtara na ogo nke ngwụcha ya na uru ọ na -enye. Ma ọ dị ezigbo mkpa na a na-eme ihe niile a na-enweghị ọnụ ahịa ya na-arị elu. Mibro Lite na-aga n'ihu na-adị n'etiti nhọrọ ndị kacha adọrọ mmasị si ahịa ekele ya uru maka ego, y y ị nwere ike zụta nke gị na Aliexpress na ọnụahịa kachasị mma.
N'ịga n'ihu na ọdịnala anyị, ọ bụ oge imepe igbe Mibro Lite iji hụ ihe anyị hụrụ n'ime. Anyị anaghị ahụ ihe ịtụnanya na ihe ọ bụla anyị na -atụghị anya ya. Na mbụ, mgbe ị mepere akpa ahụ, ihu elekere ga -apụta, nke na -ekpugheworị ụfọdụ akụkụ nke ga-amasị anya.
Mgbe anyị wepụrụ ya n'igbe ahụ, anyị nwere ike ijide gị eriri roba, nwa. Eziokwu bụ na ọ na -adị nro karịa ka a tụrụ anya ya. N'iburu nha nke okirikiri, ọ nwere ike ịdị dị warara. Na nkenke, eriri ahụ adabaghị dịka anyị tụrụ anya ya na ichere maka smartwatch.
Na mgbakwunye na elekere n'onwe ya, anyị nwere chaja magnetized dị okirikiri iburu naanị site n'ịkwado ya. Na a di na nwunye akwụkwọ ikike ngwaahịa na a ndu ndu mkpụkpu na mbido ngwa ngwa.
Mibro Lite imewe
Obi abụọ adịghị ya ihe mbụ na-adọta anya gị nke smartwatch a, nke ahụ na-aghọkwa protagonist ya, bụ gị na ihuenyo. Otu akụkụ nke 1,3 sentimita nke na -enye ozi niile ị tụrụ anya na nlele. Daalụ a nchịkọta nke sphere ebudatara, na ndị ọzọ anyị nwere ike ịgbakwunye n'ụzọ dị mfe, Anyị nwere ọtụtụ enyo maka data na oge, oge na ọnọdụ mmega ahụ anyị kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ.
Ihe ọzọ na-apụtakwa na ihuenyo n'onwe ya bụ ịdị nhịahụ ọpịpị ebe etinyere ya na naanị milimita 9,8. Elekere dị gịrịgịrị nke ukwuu nke ahụ ya na-adịchaghịkwa arọ karịa eriri, nke anyị kwubururị dị gịrịgịrị. A smartwatch ị ga -achọpụta na ị na -eyi mgbe ọkwa ị nwetara na -ama jijiji ekele arọ dị n'okpuru 50 grams.
Zụta ugbu a nke gị Mibro Lite na Aliexpress na mbupu n'efu.
Na ịga n'ihu na ihuenyo ya, nke bụ a AMOLED 1,3 inch, dabara mata ịdị nkọ enyere na nlele ọ bụla. Nhọrọ mara mma nke agba na data ga-egosipụta mgbe ị na-eji akara akara tupu etinyere ya na-eme ka ọ dị mma na ọbụna dọta uche. Ọ bụ ezie na ya HD mkpebi ọ na-enyekwara aka nke ukwuu.
Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu okwu na nkwụsị njedebe nke njedebe ya nke mere na iko ngosi na-ejikọta n'enweghị nsogbu n'ime ahụ nke ọkpụkpọ na -eme ka ọ dị ọhụrụ. Ọ dị mfe n'ezie na enwere ike ijide ya na nsọtụ mgbe ị na-eyi ya. Ihe ga-adabere na ike nke iko ejiri mee ihe karịa ihe ọla nke ahụ nke ngwaọrụ ahụ.
Otu bọtịnụ akụkụ
na Aka nri anyị hụrụ naanị gị bọtịnụ aka. Dị ka a tụrụ anya, bọtịnụ mmetụ a nwere ọtụtụ ọrụ. Otu n'ime ha bụ rụọ ọrụ ihuenyo ọ bụrụ na ọ naghị agbanye, dịka ọmụmaatụ, na ntụgharị nke nkwojiaka. Ọ bụkwa bọtịnụ home, ịlaghachi na ihuenyo ụlọ site na ebe ọ bụla na menu. Ọzọkwa, ọ bụ ya ma gbanye bọtịnụ nke ngwaọrụ.
Na okpuru anyị hụrụ obi usu ihe mmetụta, nke na -enye nzaghachi ngwa ngwa na nke ọma. Ha na -enye ozi a pụrụ ịdabere na ya nke anyị nweworo ike ịdị iche na ngwa ngwa. Obi abụọ adịghị ya ezigbo "pro" ịtụle. Anyị na -ahụkwa magnetized Nchaji atụdo nke dabara nke ọma na chaja chaja gị.
Banyere Wiki belt ahụ nke Mibro Lite anyị ekwuola na ọ bụghị ihe dị egwu ma ọlị, ọ dịkarịa ala maka mma. N'uche anyị, elekere a, nwere ọkpụkpọ ahụ dị egwu, ọ gaara adị ka ọ ka mma iji eriri dịtụ sie ike ma sie ike. Iji kwuo na ọ na-agbanwe, ihe na-eme ka ọ dị ka ọ na-esighi ike karịa ka ọ dị. Ma o nwere a ihe dị nro na obi ụtọ ya na akpụkpọ ahụ.
Kedu atụmatụ Mibro Lite na-enye?
Elekere Mibro Lite bụ elekere ahụ onye ọ bụla na-achọ maka ebumnuche dị iche iche. Ihe bụ isi bụ na ọ na-adọrọ mmasị na anya nyere ya nhazi nke ọma. Ọzọ, dịkwa mkpa, bụ na o nwere ọnụ ahịa nke dị n'ime ike onye ọrụ ọ bụla. Mana uru ọ na -enye anyị, na mgbakwunye na ihe abụọ ndị ọzọ, na -eme ka ọ bụrụ nnukwu nhọrọ ọzọ.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ elekere na-enyocha ma na-eso gị mgbe ị na-eme egwuregwu gị, Mibro Lite ga-arụ ọrụ ahụ. Zụrụ ya ugbu a na Aliexpress kacha mma price. O nwere ihe karịrị Ụdị egwuregwu 15 dị iche iche yabụ ị nwere ike iji data niile ịchọrọ ijikwa ọganihu gị. Gụọ nke gị nzọụkwụ, tụọ ihe anya njem ma buru ya ịchịkwa calorie ọkụ na nnọkọ nke ọ bụla.
Na mgbakwunye, ị nwere ike ịtụkwasị obi na a ndebanye n'oge ndụ gị niile obi obi. Na dịka a ga -asị na nke ahụ ezughi, anyị ga -enwetakwa ọbara oxygen larịị ịgụ. O nwekwara ihe ncheta iji zere ibi ndụ nke ịnọ otu ebe, ohere nke ileba anya n'ụra ka ị wee hụ ma ị na -ezu ike nke ọma. Ma ọ bụ ọbụna mụta izu ike nwa oge site n'ịzụ iku ume gị.
Dị ka ihe mgbakwunye maka anyị ikpebi na Mibro Lite dị ka ihe mgbakwunye maka mmemme egwuregwu anyị, anyị ga-amata na o nwere. Asambodo IP68. Ị gaghị atụ egwu na elekere gị nwere ike mebie ma ọ bụrụ na ọ dị mmiri ma ọ bụ ruru unyi. Mibro Lite bụ ezigbo okirikiri.
La njikọta ọ bụkwa ihe mgbakwunye. Enweela Lite Bluetooth 5.0, ya mere, anyị nwere njikọ kwụsiri ike na nke na-adịghị ebipụ mgbe niile. Ọ bụrụ na anyị lelee nnwere onwe, Mibro Lite nwere 230 mAh batrị na-akwụ ụgwọ, nke na-enye ruo ụbọchị 10 ọrụ a na -akwụsịghị akwụsị.
Mibro Lite akụkọ ihe mere eme
Ihuenyo 1.3 "
Batrị 230 mAh
Onwe ya ruo ụbọchị 10 iji ya
Akụkụ ahụ 43 x 9.8 mm
Akụkụ eriri 245mm ogologo na 20mm obosara
Ibu ibu 48 grams
Ahịa 51.86 €
Linkzụta njikọ Mibro Lite
Ọdịdị okirikiri ahụ nwere ihe ịga nke ọma na ngwanrọ na -afanye milimita ọ bụla nke ihuenyo.
Ihuenyo na nha na mkpebi dị oke mma.
Obere ibu, ihe na-erughị gram 50.
Ọ na -apụta nke na -esighi ike na nsọtụ ebe a na -echebeghị iko ahụ.
Eriri adabaghị n'ụkpụrụ elekere ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Mibro Lite, nyocha, ọnụahịa na nkọwapụta
Egwuregwu karting kacha mma 5 maka gam akporo